कांग्रेसमा गुट अदलबदल : देउवा र पौडेलमा को बलियो ? यस्तो थियो १३औँ महाधिवेशनको नतिजा – BRTNepal
कांग्रेसमा गुट अदलबदल : देउवा र पौडेलमा को बलियो ? यस्तो थियो १३औँ महाधिवेशनको नतिजा
बिआरटीनेपाल २०७४ चैत २२ गते २१:३७ मा प्रकाशित
पदाधिकारी चयन छाडेर सिधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने दबाब –
काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीसहित ६४ खुला केन्द्रीय सदस्यमा शेरबहादुर देउवा पक्षका ३६ र रामचन्द्र पौडेल पक्षका २८ निर्वाचित भएका थिए । देउवा पक्षमा खुमबहादुर खड्का समूह पनि सामेल थियो । उनको समूहबाट खड्कासहित शङ्कर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल र अजयकुमार चौरसिया पनि थिए । तर, केही दिनअघि खड्काको निधन भएसँगै सो समूहमा रहेका चार सदस्य कुन पक्षतिर लाग्छन् भन्ने बहस काङ्ग्रेसभित्र सुरु भएको छ । अब पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव आए यी नेताहरूले देउवालाई नै साथ दिन्छन् या छुट्टै समूहका रूपमा उभिन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन ।
काँग्रेसमा पदाधिकारीको मनोनयन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको दुई महिनाभित्र पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने भए पनि दुई वर्षसम्म अपूर्ण नै छ । निर्वाचन समीक्षा बैठकपछि देउवाले पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव ल्याउँछन्ल्या/हुँदैनन् चासोसाथ हेरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।संस्थापनकै नेता जो देउवासँग असन्तुष्ट छन्
१३औँ महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट जितेकामध्ये चिनकाजी श्रेष्ठ प्रस्टै रूपमा देउवा पक्षतिर लागेका छन् । सुशील कोइराला सभापति र संसदीय दलको नेता हुँदा श्रेष्ठ प्रमुख सचेतक थिए । तर, सुशीलको निधनपछि देउवा संसदीय दलको नेता हुँदा पनि उनले श्रेष्ठलाई फेरेनन् । देउवाले यस पटक दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन समितिको संयोजकसमेत बनाइदिएपछि श्रेष्ठ देउवा पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
पौडेल पक्षबाट जित्नेमध्ये डा. नारायण खड्का र डा. मीनेन्द्र रिजाल अहिले प्रस्ट रूपमा दुवै गुटमा खुलेका छैनन् । यी दुवै नेता देउवा र पौडेल पक्षसँग सम्पर्कमा छन् । चुनावी समीक्षा बैठकमा पनि यी दुवै नेताले गुटबन्दीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । देउवा संसदीय दलको नेतामा चुनिँदा यी दुवैले देउवालाई भोट हालेको आशङ्का काङ्ग्रेसभित्र छ । सभापति प्रणाली भएकाले सभापतिलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मत नेता खड्काको छ ।
काँग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दुई महिनाभित्र पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै संयन्त्र टुंगिनुपर्ने हो । तर, १३औँ महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पदाधिकारी चयन भएका छैनन् । चुनावी समीक्षा बैठकमा प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइरालासहितका नेताले दुई वर्षमा पनि पदाधिकारी मनोनयन नभएपछि अब त्यतातिर लाग्न नहुने धारणा राखेका छन् । गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहितको युवा समूहले पनि छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित रूपमै राखेका छन् ।
काँग्रेसमा एक–एक जना उपसभापति र महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री मनोनीत गर्न पाइन्छ । तर, यो पदमा एकभन्दा बढी दाबेदार छन् । संस्थापन पक्षले पौडेल पक्षलाई तीनवटै पद दिने मनस्थिति बनाएको छैन । पदाधिकारी चयन गर्दा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै बनाउनुपर्नेछ । उपसभापतिका लागि गोपालमान श्रेष्ठ र नेता विमलेन्द्र निधि प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । आफू वरिष्ठ भएको, उसभापति भइसकेकाले आफूले नै पाउनुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । तर, श्रेष्ठभन्दा देउवाको जोड निधितिरै बढी देखिन्छ ।
महामन्त्रीका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख दाबेदार हुन् । नेता बालकृष्ण खानले पनि आकाङ्क्षा राखेका छन् । तीनमध्ये कार्कीप्रति देउवा सकारात्मक छन् । तर, सहहामन्त्री भइसकेका खड्का र देउवालाई नजिकबाट साथ दिँदै आएको भन्दै खानले पनि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका खानसहित, डा. प्रकाशशरण महत, खड्का समूहकी पुष्पा भुसाल र पौडेल पक्षका दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका नेताले आकाङ्क्षा देखाएका छन् ।
डा. ढिला संग्रौला
प्रदीप पौडेल (सिटौला पक्ष)